စစ်တပ်ဝန်ဆောင်မှု | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
စစ်ဘက်ကဒ်တွင်ဆောင်းပါး ၁၈ "ခ"
စစ်တပ် ID အမျိုးအစားလိင်မှုဆိုင်ရာပုဒ်မ ၁၈ "ခ" ။ လွှင့်ပစ်လိုက်ရင်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူ့ကိုမှမပြပါနဲ့။ အမျိုးအစား B ကသူတို့ကိုငြိမ်းချမ်းရေးကာလမှာခေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။ အပိုဒ် ၁၈။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်ခြင်း - ဤဆောင်းပါးသည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ပြpsych္ဌာန်းထားသည်။
ပခုံးကြိုးအစွန်းမှအငယ်တန်းတပ်ကြပ်ကြီး၏အစင်းအကွာအဝေးဘယ်လောက်လဲ။ 3! ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းကာကွယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန ၀ န်ကြီးဌာန၊ ၀၉.၀၁.၂၀၁၁ N ၁၅၀၀ "စစ်ယူနီဖောင်းနှင့်သင်္ကေတများ ၀ တ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ" အရ ...
သူတို့ကမေးခွန်းတွေမိဘများဖြည့်ဖို့စစ်တပ် commissariat ပုံစံအားပေးသော: ဆွေမျိုးများနှင့်အရွယ်အစား့ / pl အိမ်ယာပေါ်ဒေတာ
မိဘများအနေဖြင့်စစ်ရေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းဌာနတွင်မေးခွန်းများဖြည့်ရန်မိဘများကဆွေမျိုးများနှင့်လစာပမာဏ၊ အိမ်ရာထောက်ပံ့မှုနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များ၊ လျှို့ဝှက်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုမပေးပါ။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ...
Category: သက်တမ်းကုန်ဆုံးပါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ B4?
B4 သင့်လျော်သောအမျိုးအစားကဘာကိုဆိုလိုသလဲ မသင့်တော်ပါ၊ B-3 သည်အသင့်အတင့်သာရှိသေးသဖြင့်သင်သည်စစ်မှုထမ်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သော်လည်းအကန့်အသတ်ဖြင့်သာဖြစ်သည်။ ရိုးရှင်းတဲ့သောတပ်များအတွက်။ သိပ်မရှိတဲ့နေရာ ...
သင်္ဘောပေါ်ရေတပ်ထဲဘယ်လိုရောက်ရမလဲ။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံသားများ၏စစ်မှုထမ်းရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအပိုဒ် ၁၄ အရ ၀ န်ထမ်းအဖြစ်စစ်မှုထမ်းရန်ခန့်အပ်ခြင်း၊ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏တပ်မတော်ဌာနခွဲ၊
စစ်တပ်ကဘာလဲ တပ်မှူးရုံးနှင့်ဘာလုပ်သလဲ။ ၎င်းကိုယခုအခါရဲတပ်ဖွဲ့ဟုခေါ်သည်။ နာမည်ကသူ့ဟာသူပြောတယ်။ ၉၃.၂ ။ တပ်မှူးဝန်ဆောင်မှု၏အဓိကတာဝန်များမှာ - အစီအမံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်သည်။
စစ်တပ်ကျောင်းကိုသွားကြဖို့ကခက်ခဲဖြစ်တယ်, လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများလိုအပျကွောငျး ???
စစ်သင်တန်းတက်ဖို့အခက်အခဲရှိပါသလား။ သင်ကျောင်း ၀ င်ခွင့်အတွက်ဘာလိုအပ်ပါသလဲ ??? မဟုတ်ပါ။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံသားဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ငရဲပြည်သည်ပုံမှန်တက္ကသိုလ်ထက်ပိုမိုခက်ခဲသည်။
ပုဂ္ဂလိကထံမှဗိုလ်မှူးကြီးဖို့အချိန်ဘယ်လောက်ဖြစ်သင့်သလဲ ရာထူးကနေရာထူးမှပျမ်းမျှအချိန်! သူကားအဘယ်သူသိသနည်း
သီးသန့်မှဗိုလ်မှူးကြီးအထိဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ ရာထူးမှအဆင့်သို့ပျမ်းမျှအချိန်! ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ? ဤသည်မှာစစ်မှုထမ်းရန်ဆင့်ခေါ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းမှကောက်နုတ်ချက်ဖြစ်သည်။
စစ်တပ်မှဆိုင်းငံ့ခြင်းပြcollegeနာ အကယ်၍ ကောလိပ်ရှိသင်၏သားသည်သူ၏အခွင့်အရေးကိုတရား ၀ င်ဆိုင်းငံ့မှုတစ်ခုအားတရားဝင်ကျင့်သုံးရန်အချိန်ရှိပါကသဘာဝအားဖြင့်သူအားနောက်တစ်ကြိမ်ဆိုင်းငံ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါအလေးပေး - ရုံး, တရားဝင်။
ချစ်ခင်ရပါသောမှေး, ဒါမှမဟုတ်ဉာဏ်အလင်း: ကဦးခေါင်းခွံနှင့်စစ်တပ်တစ်အပိုင်းအစပါသလဲ တစ်နှစ်အစေခံဖို့ဦးခေါင်းခွံနိုင်သလား? ကြိုတင်မဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် !!!
ချစ်ခင်ရသောနတ်ဆိုးများ၊ သို့မဟုတ်ဉာဏ်အလင်းရှိသူများ၊ စစ်တပ်တွင် ဦး ခေါင်းခွံနှင့်အပိုင်းအစတစ်ခုကဘာလဲ။ ဦး ခေါင်းခွံသည်တစ်နှစ်ကြာနိုင်ပါသလား။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ!!! ဦး ခေါင်းခွံ၊ ဆံပင်၊ စိတ်ဓာတ်စသည်တို့သည်စစ်တန်းလျားအယူအဆတစ်ခု၏အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည် ...
ခြားနားချက်အရံပေါ်နေသောနိုင်ငံသားများ၏ပထမ, ဒုတိယနှင့်တတိယအမျိုးအစားကဘာလဲ? အဘယ်သို့ငါ, ငါ့ရာထူးကဘယ်လိုသိရသလဲ
အရံ၌နေသောပထမ, ဒုတိယနှင့်တတိယအမျိုးအစားနိုင်ငံသားများအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ ငါဘယ်အတန်းရှိသလဲ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကအမျိုးအစားများအတွက်အသက်အရာရှိများအတွက်5နှစ်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။
မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေ။ ဘာတွေလဲ .. သူတို့ဘာတွေပါလဲ။
မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေ။ ဘာတွေလဲ .. သူတို့ဘာတွေပါလဲ။ Ground Forces (Land Forces) သည်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း (RF Armed Forces) ၏လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့်စစ်ဆင်ရေးနည်းလမ်းများအရအမြောက်အမြားဆုံးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။
စစ်တပ်မှမည်သို့ထွက်ခွာနိုင်မည်နည်း စာချုပ်အရဝန်ဆောင်မှုမှသင်၏စာချုပ်ကိုဖတ်ပါ၊ ၀ န်ဆောင်မှုမှထုတ်ပယ်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားလုံးကိုထိုတွင်ဖော်ပြထားသည်။ စာချုပ်ပါစည်းကမ်းချက်များကိုမလိုက်နာခြင်းအတွက်ထုတ်ပယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာရေးရန်လိုအပ်သည်။ ဂ။
ငါဆင့်ခေါ်ခံ, ငါလက်မှတ်ထိုးမပြုခဲ့ ... ငါစစ်တပ်မှတ်ပုံတင်နှင့်စစ်သားစုဆောင်းရေးရုံးကိုသွားရပါမည်နည်း
ငါဆင့်ခေါ်ခံ, ငါလက်မှတ်ထိုးမပြုခဲ့ ... ငါစစ်တပ်မှတ်ပုံတင်နှင့်စစ်သားစုဆောင်းရေးရုံးကိုသွားရပါမည်နည်း စစ်မှုထမ်းရန်အသက်အရွယ်သည်စစ်မှုထမ်းရန်စာရင်းသွင်းရန်ရုံး၌စာရင်းသွင်းရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဤအချက်မှာစစ်မှုထမ်းခြင်းမှရှောင်ရှားခြင်း၊ ဥပဒေကိုမသိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါငါရှိတယ်ရှိခြင်းနောင်တမ Semenov တပ်ရင်းတပ်မဟာကိုယ်ရံတော်အတွက်စစ်မှုထမ်းရန်တာဝန်ပေးခဲ့သလဲ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်လုံခြုံရေးတပ်မဟာရှိဆီယိုနော့ဗ်စကီးတပ်ရင်းရှိစစ်မှုထမ်းရန်တာ ၀ န်ခံထားရပြီးထိုတွင်ရောက်ရှိခြင်းအတွက်နောင်တရမည်လား။ စုဆောင်းရေးရုံးကသင့်ကိုဆုံးဖြတ်သည့်နေရာတွင်အမှိုက်သရိုက်များဖြစ်သည်။ သင်၏တပ်များကိုသာအသိအမှတ်ပြုသည်။
အငြိမ်းစားအရာရှိနှင့်အရံအရာရှိအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။ ပထမ ဦး ဆုံးအဖြေကတော့အမှန်ဆုံးပါ။ သူတို့ကိုစစ်မှုထမ်းခြင်းမှအနားယူရန်ဖြစ်စေ၊ သူတို့ကိုအကြားခြားနားချက်ကိုတကယ်အမျိုးအစား၌တည်ရှိ၏ ...
ပြည်သူ့ရေးရာ ၀ န်ထမ်းများကဘယ်သူတွေလဲ။ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းအဖွဲ့ ၀ င်များ၏ ၀ န်ထမ်းများမှာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာဘတ်ဂျက်များမှဖယ်ဒရယ်၊ ဒေသန္တရသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်၏ဘတ်ဂျက်မှဘဏ္EDာငွေရထားသောဖွဲ့စည်းပုံများ ...
"ခံတပ်" အစီအစဉ်ကဘာလဲ? "ခံတပ်" အစီအစဉ်ကဘာလဲ? ဘယ်မှာငါကအခြားတည်ဆဲအစီအစဉ်များအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေနိုင်သလဲ
အစီအစဉ်ခံတပ်ဆိုတာဘာလဲ။ အစီအစဉ်ခံတပ်ဆိုတာဘာလဲ။ အခြားရှိပြီးသားအစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာရမည်နည်း။ မင်းမလိုအပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ခေါင်းကိုမဖြည့်ပါနဲ့။ အစီအစဉ်တွေအကြောင်းအားလုံးကိုသိချင်တယ်။
စိန့်ပီတာစဘတ်ကိုရှေ့နေအတိုင်ပင်ခံမှတစ်ဆင့်တရားဝင်ရောင်းချခြင်းသည်ရူဘယ်ရှစ်သောင်းအထိ (သို့) ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏လစာသို့မဟုတ်အခြားဝင်ငွေပမာဏမည်မျှရှိသည်။
စစ်တပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်စစ်သားစုဆောင်းရေးရုံးမှလိုင်စင်ရယူရန်အတွက်အမျိုးအစား B အတွက်သင်တန်းမည်မျှကြာမည်နည်း။ စစ်မှုထမ်းခြင်း၏တောင်းဆိုချက်အရစစ်ဘက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်စစ်မှုထမ်းရန်ရုံးသည်“ အမျိုးအစား C ယာဉ်မောင်းများကိုလေ့ကျင့်ခြင်း” အစီအစဉ်အရပုံမှန်မောင်းနှင်မှုကျောင်းတွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပို့ချပေးနိုင်သည်။
53 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,795 စက္ကန့်ကျော် Generate ။